IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA LANGOKU (UKUHONJISWA KUNYE NOYILO) - IINGCAMANGO ZEGUMBI LOKUPHILA
Eyona Iingcamango Zegumbi Lokuphila Iingcamango zeGumbi lokuPhila laNgoku (ukuhonjiswa kunye noyilo)
Le galari ibonisa imifanekiso yegumbi lokuhlala elinemibala eyahlukeneyo, ifanitshala kunye nokuhonjiswa.
Amagumbi okuhlala okwangoku ahlala enezinto ezicocekileyo ezinomoya oqhelekileyo. Fumana ukhuthazo lokuhombisa igumbi lakho lokuhlala ngale ndlela intsha yoyilo.
Rhoqo xa kuyilwa indlu, igumbi lokuhlala liba liziko lekhaya, kokubini ngokwenyani nangokusebenzayo. Xa abantu bengena kumnyango omkhulu, igumbi lokuhlala yindawo yokuqala ebabulisayo, kwaye kuvela kweli gumbi lokuhlala apho ezinye iindawo ziyafikeleleka.
Ukusuka kwigumbi lokuhlala, umntu unokufikelela kwizinyuko ukuya kumgangatho wesibini okanye kwigumbi elingaphantsi, umnyango otyibilikayo wepatio yangaphandle, nakwigumbi lokuhlambela labandwendweli. Kwimeko yezindlu ezivulekileyo zesicwangciso, amagumbi okuhlala amanyene kwigumbi elinye kunye negumbi lokutyela kunye nekhitshi, okwenza indawo yokusebenza kunye neyentlalo.
Ukuhonjiswa kwegumbi lokuhlala ngoku
Indawo yomlilo / iConsole
Isofa kunye neLounge Set
Imifanekiso yamaGumbi okuPhila okwangoku
Uyilo oluhle lwegumbi lokuhlala apha ngasentla lubonisa zonke iindonga ezimhlophe kunye nophahla kunye neetayile ezimhlophe zaphantsi. Iimpawu ezifudumeleyo zokhuni zikhona kwangoko ngefestile ukuyila kunye nokugcoba okucocekileyo kodonga ngendawo yokubasa umlilo kunye nebhentshi yamatye.
Igumbi lokuhlala elibekiweyo likwisikhumba esimhlophe esicocekileyo esenziwe ngombala kwaye ihonjiswe ngombala ongwevu wokuphosa umqamelo kunye neempawu zombhoxo wendawo. Itheyibhile yekofu yeziko kuphela kwento engekho emgceni kunye neglasi emile ngokungalinganiyo kunye neediski zesinyithi ezantsi kwinkxaso.
Ngaphandle kokuba yindawo engundoqo yendlu, kukho ezinye izinto ezibalulekileyo eziya ekucwangcisweni kwendawo yokuhlala ephendula kwiimfuno zeli xesha. Nazi izinto ezimbalwa ekufuneka uzithathele ingqalelo xa ujonge igumbi lokuhlala elihonjisiweyo kunye nemibono yoyilo:
itemplate yasimahla yesimemo somtshato
Oku kuthandwa ngakumbi ukuba indlu inamabali amabini okanye nangaphezulu ubude, evulekileyo ukuya kumgangatho ongezantsi wenziwe kumgangatho ongentla. Oku kuluncedo kwigumbi lokuhlala kuloo ndawo yokuphefumla eyenziweyo, inika umxholo wendlu ukukhanya okukhulu kunye nendawo.
Ikwaxhamlisa ipaseji ephezulu, ukuyinika i-vista entle yokujonga phantsi, kwaye ikwonyusa ukuphakama kweewindows.
Ukongeza, ukuba nophahla oluphezulu lwegumbi lokuhlala kuvumela umninikhaya ukuba akhethe isibane esijingayo esinokuba sisiteyitimenti endlwini, njengoko kukho indawo ethe kratya yokuzama uyilo olukhulu, olunesibindi.
Ngaphandle kwetafile yekofu esembindini, uninzi lweendawo zokuhlala kwigumbi lokuhlala zigxile kwindawo ephambili ngaphambili.
Ezona ndawo kugxilwe kuzo zihlala zakhelwe ukugxininisa yindawo yomlilo okanye umabonwakude / ikhonsoli yolonwabo okanye zombini. Oku kunika abantu isizathu sokuhlangana kwigumbi lokuhlala, kwaye ikwanika inkcazo kwinto enokuba ludonga olungenanto.
Ukufikelela kwipatio yakho yangaphandle kwigumbi lakho lokuhlala eliphambili kusebenza kakuhle kwimizi enenjongo yokonwabisa iindwendwe ezininzi.
Oku kuluncedo ngakumbi ngexesha lamaqela njengoko indawo esondeleyo yendawo yokuhlala inokwandiswa iye ngaphandle ngaphandle apho iindwendwe ezininzi zinokunxibelelana phakathi kwegadi.
Nokuba ukufikelela ngaphandle kuvaliwe, ukuba nembono yegadi kwigumbi lokuhlala kuyindlela entle yokuzisa ubomi kunye nomlinganiswa kwindawo evaliweyo.
Kubalulekile ukuba indawo yokuphumla uyikhethele iisuti kunye nomxholo wegumbi lokuhlala elihonjisiweyo.
Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ezinye iisofa kunye nezitayile zokuphumla zinokuphelelwa lixesha kakhulu ukuze zilungele igumbi lokuhlala elinesiqhelo kunye nexesha langoku.
Ezinye izitayile zokulala onokuthi ucinge ngazo xa uhombise indawo yokuhlala yesiqhelo yiCandelo, iTuxedo, iLawson neMid Century yale mihla.
ICandelo lilungile kwiindawo ezinkulu zokuhlala, apho iseti yesofa inokubekwa imilo eyi-L okanye u-U, ngelixa iTuxedo ineprofayili enye yokuphakama kweengalo nasemva kwayo, isenza isisombululo esicocekileyo, esingaphelelwa lixesha sithuba esincinci.
I-Lawson kunye ne-Midcentury Modern zizo zombini izitayile zakudala zakudala kodwa zinokubonakala zintle nakweyiphi na indawo yokuhlala yangoku xa iphakanyisiwe ngempahla yanamhlanje.
udonga olugqwesileyo lwamatye
Nangona iikhontrakthi zesicwangciso esivulekileyo zithandwa, ukucacisa indawo yegumbi lokuhlala kusabalulekile ukunika ifanitshala yegumbi lokuphumla imvo yomanyano.
Endaweni yeekhaphethi zemveli zasePersi kunye nokuphosa iiragi, amagumbi okuhlala ale mihla ayindawo elungileyo yokuzama ukugqiba okutsha okunje ngeekhaphethi zeshag kunye namalaphu alukiweyo anjenge-abaca kunye ne-hemp.
Ukongeza, indlela ezibekwe ngayo ezi khaphethi phambi okanye ngaphantsi kweeseti zibalulekile ngokulinganayo. Ngokwesiko inokubekwa kanye phambi kwegumbi lokuphumla elinetafile yekofu njengombindi wayo-oku ngokwesiko kufezekiswa ngombhoxo oqhelekileyo we-5 'x 8'.
Umbhoxo omkhulu we-8 'x 10' ungabekwa endaweni yokuba unyuke uye kuthi xhaxhe kububanzi besofa ngelixa ugqume ngokupheleleyo imilenze yezihlalo kunye nezihlalo ezivakalayo.
Ngamanye amaxesha, indawo ekubhekiswa kuyo isenokungabi yifenitshala kodwa iindonga zendawo yokuhlala-umzekelo, ukugcina ityali ilungisiwe ngokulinganayo malunga nonyawo olunye kude nazo zonke iindonga.
Abanye abayili bezinto zangaphakathi bacebisa ukuba kusetyenziswe umlinganiselo omkhulu we-9 'x 12' yombhoxo, ukulungelelanisa ifanitshala yakho ukuze zonke zibandakanywe kwirug malunga nesiqingatha, kwaye emva koko uqinisekise ukuba indawo yomgangatho we-18 iyafumaneka ngokujikeleze ityali.
Lo ngumgaqo olungileyo, olula ukuwulandela, nangona kunjalo, qaphela ukuba akukho mthetho wumbi kufuneka ubekwe njani umbhoxo, kwaye olona lwakhiwo lubalaseleyo luxhomekeke kukhetho lwakho kunye nobungakanani bendawo yakho yokuhlala.
Igumbi lokuhlala linombala omhlophe wombala wesiseko kunye nemithi yendalo kunye nokugqitywa ngamatye. Ngaphandle kokuba zonke iindonga kunye nophahla lwayo lucocekile emhlophe, ikona enye yeli gumbi lokuhlala lale mihla inezinto ezakhiweyo ezakhiweyo ezishelufini kumthi weplanga okhanyayo.
Elinye ikona elibaselwe umlilo liziko elityebileyo kunye nebhentshi yelitye elimnyama. Endaweni yengubo yesiqhelo, ukusikwa okuqinileyo kweenkuni ezishushu kwabekwa ngokuthe tye phezu kweziko, kwaye emva koko kwakhona ngokuthe nkqo ukwahlula kudonga lwekona.
Indawo yokuhlala icwangciswe ngaphezulu kwendawo yombala we-beige enesitayile esimhlophe esimhlophe setafile kunye netafile yekofu yendawo emhlophe. I-accent iphosa imilenze kwi-orenji eqinileyo, igrey shag kunye nezinye iipateni ezingcolisa indawo yonke yokuhlala.
Le ndlu inazo zonke iindonga ezimhlophe kunye nentsimbi emnyama eyenziwe ngamacango okushenxisa, kwaye kuyabonakala nakwizinto ezigqityiweyo ezisetyenziswa kwiikhitshi zesiqithi ezibini. Ukukhanya komgangatho weplanga ohamba ngokuthe tyaba ukusuka ekhitshini ukuya kwindawo yokuhlala, ecaciswe ngumbala omhlophe omhlophe wendawo.
Imilo emhlophe emhlophe emile okwe-L isofa yecandelo ihonjiswe ngemiqamelo emthubi emthubi naluhlaza okwesibhakabhaka, egxile kwitafile yekofu yangoku ye-rustic eyenziwe ngomthi ongagungqiyo kunye nokuhonjiswa kwesikhumba.
Ukujonga ezantsi ukusuka kumgangatho wesibini ovulekileyo ukuya ezantsi kwipaseji yeglasi yeglasi, isofa esecaleni emile okwe-L kwimpahla engwevu ihonjiswe ngemiqamelo ebomvu eqaqambileyo nebhulowu.
Isofa ijolise kwitafile yekofu ephantsi eyenziwe ngomthi kwaye inendawo elula yomlilo egumbini legesi ngombhobho ocekeceke ngombhobho. Inkqubo ye- igumbi lokuhlala ikwi tile yelitye engathathi hlangothi, ehambelana nokuziva okwangoku kuyo yonke indlu.
Igumbi lokuhlala eliphambili langoku lijongene neseti enkulu yeglasi yokuhambisa iingcango kunye neefestile ezinkulu zokucoca kuphahla lwayo oluphakamileyo.
Umbhoxo we-shag ongwevu ucacisa indawo yokuhlala nge-Contemporary grey loveseat embindini wayo. Ngalinye icala, ezimbini ezimhlophe ezimhlophe zivakala zizihlalo ezinamagwegwe egolide abekwe ngokwahlukeneyo. Ukugqitywa kweenkuni eziluhlaza ezisetyenziselwa iiplanga zomgangatho ngumdlalo omkhulu kwipalali yendawo engathathi hlangothi.
Ukuya kwiklasi ye-retro ngakumbi igumbi lokuhlala langoku jonga, indawo ephambili yeli gumbi yisofa ebomvu ebomvu kunye nemiphetho yayo ejikelezileyo kunye nemilo yokuphosa.
Itafile yekofu emnyama emnyama ihlala phambi kwayo. Ngelixa isikwere esimnyama setreyini sisetyenziswa macala onke endlu, ukugqitywa komthi okhethekileyo ngomthi kwakusetyenziselwa igumbi lokuhlala, liboniswe ngophahla lwedrophu ngaphezulu kwalo kufakelwe izibane ezisisikwere.
Ukuya ngasemva, udonga olusisigxina kwipeyinti ebunjiweyo lwenziwe kwikona ecaleni kweengcango ezinkulu zeglasi.
Ngeendonga ezimbini ezipheleleyo emgangathweni ukuya kwiglasi yesilingi kunye namakhethini amhlophe amhlophe aphela kwikona emhlophe engqukuva emhlophe, isofa yecandelo elimdaka ibubonisa ngokugqibeleleyo eli gumbi lendawo lokuhlala lejometri.
I-peacock enkulu eluhlaza okwesibhakabhaka i-Ottoman yayisetyenziswa njengendawo ephambili yokuphumla emile okwe-L, kwaye igumbi lonke lihonjiswe ngomthi wokugqiba iithayile zalo zomgangatho.
Ikhoneni le-redwood patio deck liphela ngokucocekileyo ngombala omnyama wesinyithi, kuzala umthi weplanga okhanyayo wombala okhanyayo ngaphakathi kwendlu.
Umbhoxo omhlophe we-shag ubekwe kwigumbi lokuhlala kunye nezitulo ezimhlophe eziphakanyisiweyo zase-Barcelona kwelinye icala kunye nesofa yesitayile seLawson esineebhulowu zokuphosa kwelinye.
Itheyibhile yeziko lekhofi itafile enesakhelo sesinyithi kunye nokukhanya okuphezulu komthi okuthe tyaba okuhambelana neeshelfu ezivulekileyo ekugqibeleni ezenziwe ngokugqitywa okufanayo.
Igumbi lokuhlala eligcweleyo elunxwemeni ligxile kwindawo enkulu ethe tyaba yomlilo eyakhiweyo kunye nescreen seTV ngaphezulu. Ukwakhiwa kujikelezwe macala omabini ziifestile ezinde, ezibhityileyo ezinezivalo ezenziwe ngomthi ezimhlophe. Bona Okuninzi uyilo lwegumbi lokuhlala elingena couchless Apha.
Isofa iseti inemisonto emhlophe ye-canvas emilukweni eyolukiweyo kunye nomzimba womthi omnyama, ehambelana netafile yekofu yomthi omnyama enemilenze yentsimbi exande. Izimvo ezininzi zegumbi lokuhlala zangoku zisebenzisa izinto ezingathathi hlangothi ezidityaniswe nemigca ecocekileyo ukwenza indawo eyamkelekileyo nenomtsalane.
Esi sithuba sokuphila sahluke ngokukodwa, sineepaneli zodonga ezibonisa umbala ezimfusa ezibheke ngasemva, zenziwe zabonakala ngathi ziyadada ngokukhanya okuthe tyaba komgca ngaphezulu nangaphantsi kweepaneli zodonga.
Imisonto eshushu, yeorenji ibekwe ngokuthe tyaba, igxininisa kakuhle kwiindonga ezimhlophe kunye nophahla. Iziqwenga zefanitshala zakudala ziyabonakala kwisofa esimdaka ngombala u-L kunye nengxowa yeembotyi, kunye neenkuni kunye nemabhile setyhula yetafile yekofu kunye nesibane esisezantsi somgangatho.
Nangona incinci kwaye ilula, le sofa imhlophe iphakanyisiweyo emhlophe egungxiswe kwikona yegumbi lokuhlala ibonakala icocekile kwaye intle. Ukongeza, ubume bayo obungu-L buthelekiswa kakuhle nefestile yekona emile engu-L kwelinye icala, enziwe ngombala omhlophe.
Iindonga zikwisambatho esimnyama esimnyama esilukiweyo esihamba kakuhle kwikhaphethi emhlophe kunye nophahla olumhlophe olucacileyo. Ifenitshala ye-Kitschy enjenge-antique trunk coffee table kunye ne-stool e-yellow e-yellow kunye ne-Arabesque pattern izisa uvuyo kwindawo.
Olu loft lwanamhlanje lweMizi-mveliso lubona umgangatho wesibini ngombono wendawo yokuhlala enophahla oluphezulu. Indawo yokuhlala ngokwayo inezityalo ezininzi zangaphakathi, kunye ne-trellis ngasemva kweesofa ezimhlophe zofele kwikona yegumbi.
Ukwahlulahlula okugxininisayo kukwasetyenziswa ngokusetyenziswa kwesakhelo esimhlophe esimhlophe esinepateni emhlophe yamawele phakathi, umahluko ocacileyo kumbhobho wesinyithi ongwevu wombhobho wokukhupha umlilo kwiziko leziko elivulekileyo. Olunye uchukumiso lweMizi-mveliso lubandakanya itafile yekofu yeenkuni ezishushu kunye nesibane esixhonywe kwimizi-mveliso esiguqulwe saba sisibane somgangatho wentlanzi.
ogama lakhe lihamba kuqala kwiimemo zomtshato
Izimvo zangoku zegumbi lokuhlala ezisebenzisa umbala kunye neepateni zinokuba nefuthe elikhulu kuyilo. Oku uyilo oluhle lokuhlala Uwusebenzisa ngokufanelekileyo umbala, ngombala omfusa velvet opholstery osetyenziselwa iseti isofa, ehambelana nombhoxo womhlaba omhlophe nomdaka.
Ukongeza kwi-quirky Contemporary look, isibane esixhonyiweyo esikhethekileyo esinezibambo ze-surrealist kwisitya ngasinye sesibane esisetyenzisiweyo, kunye nodonga lwesibuko esipheleleyo sodonga olubhalwe imigca yesetyhula emhlophe.
Ukugqitywa kwamatye e-beige amatye asetyenzisiweyo emgangathweni awathathi hlangothi kuzo zonke ezi zinto, kwaye ikwahambelana kakuhle nomthi omnyama kunye neshelffu enezinto ezibengezelweyo kunye neshedyuli yeTV.
Bona Okuninzi uyilo oluhle lwegumbi lokuhlala kweli phepha legalari.
iringi yokuzibandakanya erhabaxa
iilokhwe zomtshato zomtshato wesibini ngaphezulu kwama-50
Ubungakanani bendandatho ye-8 mm
izipho zakhe zomtshato nezakhe